Home / Career/Workspace Related
🔸တစ်နေ့ ၈ နာရီ တိတိ နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလုပ်ကိုင်တတ်ဖို့ ဆိုကလည်း ခက်ခဲလွန်းတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် ခံယူထားသင့်တဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် စည်းမျဉ်းလေးတွေ ချမှတ်ထားခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင် စိတ်ချမ်းသာတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို ဖန်တီးနိုင်ပါပြီ။ ဆိုတော့ ဘယ်လို Rule လေးတွေများလည်း ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
The Worst Behavioural Traits in the Workplace
🔸 လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ခေတ်သစ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ “ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းရမည်” ဆိုတဲ့အချက်ကို Job Requirements တိုင်းလိုလိုမှာ ပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဘာကြောင့်ဆို ခေတ်သစ် လုပ်ငန်းခွင်မှာ Social Skills ဆိုတာကိုက အရေးပါတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခု ဖြစ်လို့လာတာမို့ပါ။ 🔸ဘာကြောင့် ဒီလို သတ်မှတ်ရလာဆိုတာကလဲ Social Skills နဲ့ Self-awareness ကောင်းကောင်းရှိသူ တစ်ယောက်ဟာ Emotional Intelligence လို့ ခေါ်တဲ့ EQ မြင့်မားကြသူ ဖြစ်နေလို့ပါ။ သုတေသီတွေရဲ့အဆိုအရ Job Performance တစ်ခုရဲ့ ၅၈% ဟာ EQ အပေါ် အခြေပြုပြီး လုပ်ဆောင်ထွက်ပေါ်လာကြတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း EQ မရှိသူ …. အခြေခံအားဖြင့် Social Skills နဲ့ Self-awareness မရှိသူတစ်ယောက်ဟာ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြဿနာ အခက်အခဲတွေရဲ့ အဓိက တရားခံ တစ်ယောက်ဖြစ်နေမှာတော့ အသေအချာပါပဲ။ 🔸 ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း ဒီလို Social Skills နဲ့ Self-awareness ကစလို့ EQ ဆိုတာမျိုးလစ်ဟာနေတဲ့ လူတွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်ပ တ်ဝန်းကျင်အတွင်း အဆိပ်အတောက်ဖြစ်နေတဲ့အပြုအမူတွေ ခံယူချက်တွေနဲ့ အမူအကျင့်တွေ ရှိတဲ့ လူမျိုးစုံ ဘယ်နှစ်မျိုးလောက် တွေ့ရမြင်ရတတ်လဲ ? ဒီလို လူမျိုးတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်မလာအောင်ရော ကိုယ်တိုင်က ဘယ်လို ရှောင်ကျဉ်မလဲ ပြုပြင်ယူမလဲ ? ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
How Will You Picture Your Career?
ကျွန်တော်တို့ ကလေးဘဝတုန်းက အသက်ကြီးလာရင် ဘာလုပ်မလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ဆရာဝန်ကြီးလုပ်မယ်၊ အင်ဂျင်နီယာကြီးလုပ်မယ် စသဖြင့် အလွယ်တကူ ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း လက်တွေ့ဘဝမှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ရပ်တည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ ဘယ်လမ်းကိုလိုက်ရမလဲဆိုတဲ့ Career ရွေးချယ်မှုပြဿနာက ခေါင်းစားစရာ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ ကျောင်းပြီးအောင်တက်ပြီးမှ အဆင်ပြေတဲ့ အလုပ်ကို အတွေ့အကြုံရအောင် အရင်ဝင်လုပ်ကြည့်မလား? ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လို Field မှာအခြေချမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိပြီးမှ ကိုယ်လျှောက်မယ့်လမ်းကြောင်းနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ မေဂျာတွေ သင်တန်းတွေကို ရွေးချယ် တက်ရောက်ရမှာလား? ဒါဟာ လူငယ်တွေအားလုံးလိုလို ကြုံတွေ့နေကြ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Career ကိုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲ?
ကျွန်တော်တို့ပါးစပ်က ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေက လူတွေရဲ့နားမှာ ကြားရုံသာမက ပြောသူရဲ့စိတ်နေသဘောထားကို ခံစားမိစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံ ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေကြတဲ့ စကားတွေက လက်ခံလိုက်ရတဲ့ တစ်ဖက်လူစိတ်ထဲမှာ အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုး သက်ရောက်သွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်ဖူး၊ ကြုံဖူးကြလေ့ရှိမှာပါ။ ဒီလို Verbal Slip-ups တွေဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ကျွန်တော်တို့အများစုမှာ Social Awareness မရှိကြလို့ပါ။
နေ့စဉ် အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းမျိူးစုံနဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ မရှိမဖြစ်ရှိထားသင့်တဲ့ စွမ်းအားတစ်ခုက ဘာကိုမဆို စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်စွာ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းပါပဲ။ စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်စွာ နေတတ်ဖို့ဆိုတာကလည်း လွယ်ကူတဲ့အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ ဖြစ်လာသမျှ အခက်အခဲတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ Challenge တွေအားလုံးကို တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာ ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီလိုဆို ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေဖို့ ဘယ်လိုမျိုး နေထိုင်ရမလဲ ... ?
Career Opportunities for Business Management Students
ကျောင်းပြီးခါနီးလို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ဝင်ရောက်ရတော့မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တိုင်း ကျောင်းသားအများစုအတွေးထဲမှာ ပေါ်လာလေ့ရှိတာက ကိုယ်ရွေးချယ်တက်ရောက်လိုက်တဲ့ Major နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဘယ်လို Career ကို ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးက Business Management ဘွဲ့ရ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများစုမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ကဲ ဒီလိုဆို Business Management ဘွဲ့နဲ့ လျှောက်လှမ်းရမယ့် Career Pathway မှာ ဘယ်လို Career Opportunities တွေ ရှိနေပြီလဲ?